China New Arrivals Breathable Zapatillas Casuals Shoes Running Custom Logo Sneaker Ho an'ny Lehilahy Vehivavy fanamboarana sy orinasa | JIAN ER
Fahatongavana Vaovao Ravoravo Zapatillas Kiraro manao kiraro mihazakazaka Sneaker ho an'ny lehilahy vehivavy
Ny lamaody lamaody lamaody lamaody lamaody lamaody tsy miakanjo an'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny orinasan-kiraro JIANER dia manolotra vokatra vaovao amin'ny fararano sy ririnina. Ny harato ambonin'ilay vatan'ny kiraro dia malefaka ary mifanentana tsara hamonosina ny tongotra. Mivezivezy ao anaty kiraro ny rivotra, ary ny loko mifanohitra dia mifanaraka amin'ny famoronana fironana fohy. Ny ambony ambony dia manan-karena amin'ny sosona ary maneho toetra. Ny fehiloha sy ny voditongotra dia vita amin'ny akora vita amin'ny hoditra, izay tohana mafy sy ...
Ny lamaody lamaody lamaody lamaody lamaody lamaody tsy miakanjo an'ny lehilahy sy ny vehivavy. JIANER orinasa kiraro dia manolotra vokatra vaovao amin'ny fararano sy ririnina. Ny harato ambonin'ilay vatan'ny kiraro dia malefaka ary mifanentana tsara hamonosina ny tongotra. Mivezivezy ao anaty kiraro ny rivotra, ary ny loko mifanohitra dia mifanaraka amin'ny famoronana fironana fohy. Ny ambony ambony dia manan-karena amin'ny sosona ary maneho toetra. Ny rantsan-tongotra sy ny voditongotra dia vita amin'ny akora vita amin'ny hoditra, izay tohana mafy ary tsy mora vaky. Ny famolavolana tady voditongotra dia mampiseho ny maha-izy azy ary mora hitafy sy esorina. Ny midsole dia vita amin'ny fitaovana MD, ny elastika avo lenta ary ny fahalemem-panahy, ny fandefasana ary ny famerenam-bolo. Ny outsole dia vita amin'ny akora vita amin'ny fingotra, izay manana karazan-tànana miharo tany sy anti-slip. Izy io dia mety amin'ny dia isan'andro, hazakazaka fanatanjahan-tena ary sehatra isan-karazany.
JINJIANG JIAN ER SHOES & GARmentsS CO., LTD. dia naorina tamin'ny 2006 tao Jinjiang City any Shina. Manana traikefa amin'ny fanaingoana maherin'ny 15 taona isika .Manana orinasan-kiraro miaraka amina mpiasa 200 eo ho eo izahay. Jian Er Shoes Company dia manana tranobe 2, biraon'ny birao ny iray ary tranobe famokarana kiraro ny iray. Mirefy 6000 metatra toradroa ny velarany, ary manodidina ny 1.000 metatra toradroa ny efitrano fampirantiana ny kiraro.Orinasa Jian Er Shoes mamokatra indrindra kiraro, kiraro mahazatra, kiraro fihazakazahana, kiraro fanatanjahan-tena, kiraro ivelany, kiraro baskety, kiraro kitra, kiraro, kiraro , ampidiro olona kiraro,VEHIVAVY Shoes sy ny ankizy Shoes . Hatramin'izao, ny vokatra avoakanay isan'andro dia kiraro 1.500, tsiroaroa manodidina ny 50.000 isam-bolana.Manolotra serivisy fitadiavana fiatoana iray ho an'ny mpanjifa manerantany. Mba hahafahana mifehy sy miantoka ny kalitao dia miasa izahay amin'ny ekipa. Manana atrikasa famokarana manokana izahay, atrikasa santionany, sampana R&D, ekipa endrika, ekipa QC, ekipa mpivarotra ary sampana fitiliana.
Teo aloha: Sneakers mpitaingina tendrombohitra an-tampon'ny ririnina ambony mpihaza mpihaza Mans Boots mitaingina tsy miaro amin'ny rano
Manaraka: Fomba vaovao mamelatra fofonaina anti-slip Zapatillas vehivavy lehilahy Sneakers Chunky ho an'ny vehivavy 2021
Kiraro ho an'ny olon-dehibe marika
Kiraro mahazatra ho an'ny vehivavy
Kiraro fanatanjahan-tena vehivavy
Kiraro fanatanjahan-tena mahazatra an'ny ankizy
Kiraro kiraro amin'ny lamaody
Kiraro fanatanjahan-tena vita amin'ny hoditra
Lehilahy Sport Sport
Kiraro mihazakazaka Men Sport
Lehilahy Sport kiraro